အမိတလို့ ရေးတဲ့စာ… – PVTV Myanmar
ဂျာနယ်မှာတော့ အမေ့သားတွေက လူ့တန်ဖိုးပါ
အရှက်တွေ ရွေးဝယ်ပေးခဲ့ရမှာ အမေရယ်
“ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေ အားတင်းထားကြပါ” တဲ့
သူတို့ပြောတဲ့ “ခဏ” ဆိုတာကိုသိတော့
ဝင်းမော်ဦးလေးရဲ့ နောက်ဆုံးသာဓုမှ မဆုံးသေးဘူး
မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် ဦးနှောက် ကျည်ဖောက်ခဲ့ပြန်ပေါ့
သိပါတယ် – လက်ဖြောင့်သူကြီးတွေရဲ့
၁၉ နှစ်သမီးဟာ စစ်သူကြီးပေါ့
အမေ… ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဆုံကြတဲ့အခါ
Gen-Z တွေရဲ့ အကြံအစည်တွေအကြောင်း
ကလေးအရေးအသားနဲ့ psy-war တွေအကြောင်း
အမေ့ မေတ္တာ ကျွန်တော်တို့ရပါစေ
ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာ အမေရပါစေ
Like – 11K Share – 1630
Sai Al says:
2021-04-19 at 4:17 PM
မှန်လိုက်တာဗျာ တရားခံ က တရားလို ပြန်လုပ်နေကျတာ ။
Chang Aayk says:
ပထမ ၁၀စက္ကန့်ကို နောက် video တွေမှာ ဖြုတ်ပေးရင်ကောင်းမယ်
Mi Nge says:
2021-04-19 at 4:20 PM
Well written . Very effective. Very touching , artistic.
Akari Soe says:
2021-04-19 at 4:22 PM
အမေ ကျန်းမာအောင်နေပါ 🙏🙏🙏
2021-04-19 at 4:24 PM
2021-04-19 at 4:32 PM
ကျနော်တို့မေတ္တာ အမေရပါစေ 🙏
Lin Khant Kyaw says:
2021-04-19 at 4:54 PM
Subtitles for disabled person and who doesn’t understand burmese language
Min Thu Wai says:
2021-04-19 at 5:11 PM
Aung Ko Htet says:
2021-04-19 at 5:20 PM
Thida Htwe says:
2021-04-19 at 7:02 PM
2021-04-19 at 7:26 PM
အမေ လည်း ကျနိးမာပါစေ။ အရေးတော်ပုံ အောင်တော့မည်။
2021-04-19 at 7:59 PM
we only trust and accept CRPH
Saw Thar Do says:
2021-04-19 at 8:49 PM
အမေ့ကို အရမ်းလွမ်းတယ် အမေ
2021-04-19 at 8:59 PM
English လိုပါ စာတန်းထိုးရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။ အကြံ ပြုတာပါ
Victorian YN says:
2021-04-19 at 10:04 PM
အသံနေအသံထားကြောင့် စကားလုံးတွေ ကြားရသူတိုင်း ပိုပြီးထိရှစေတယ်
KaungKhant KoKo says:
2021-04-19 at 11:54 PM
Min Kyaw says:
2021-04-20 at 12:10 AM
သက္ကမိုးညို ဝင်ရေးနေသလိုပဲ။ကဗျာလိုလို စာဟန်လိုလို လွမ်းစာရေးတဲ့ စာအရတော့ သက္ကမိုးညို အတိုင်းပဲ၊ ဘေးကင်းရန်ဝေးပါစေ လေ 🙏
Aye Nyein Thu Thu says:
2021-04-20 at 8:46 AM
အမှန်တရားကသာ အောင်ပါစေကွယ် 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Swe Zin Soe says:
2021-04-20 at 9:54 AM
ခြပ္ ေဒါင္း says:
2021-04-20 at 10:05 AM
အေမပန္ဖို႔အတြက္ အလွဆုံးပန္းတစ္ခင္း သားတို႔ေတြ အေမ့ေျမး Gz ေလးေတြနဲ႔ အတူပ်ိဳးေနပါၿပိး အေမ
2021-04-20 at 10:29 AM
Pan Tha Khin says:
2021-04-20 at 12:16 PM
Adi Ken says:
2021-04-20 at 1:00 PM
ဒါ ppl voice မှ မဟုတ်တာ စောက်အောက်တန်းစား မှိုင်းကြီး မင်းတို့ဟာက သရုပ်ပျက်လွန်းတယ်ကွာ
Helen Teresa says:
2021-04-20 at 2:02 PM
2021-04-20 at 2:21 PM
2021-04-20 at 2:34 PM
Paing Soe Khant says:
2021-04-20 at 9:14 PM
Myo Arkar Kyaw says:
2021-04-20 at 10:38 PM
Khin Hnin Yu says:
2021-04-21 at 9:34 AM
2021-04-21 at 10:31 AM
Soee Thu says:
2021-04-21 at 7:54 PM
2021-04-23 at 6:07 PM
Ko Cho Too Too says:
2021-04-23 at 6:55 PM
2021-04-29 at 3:45 AM
2021-05-08 at 2:17 PM
ေဒါင္း ပ်ိဳ says:
အသက္ရာေက်ာ္ ႐ွည္ပါေစ အေမ🙏🙏🙏